China Danye redio ugboro ugboro ndọlị mwepụ igwe na-eweli igwe thermagic 6.78MHz rụpụta na ụlọ ọrụ | Danye
Danye redio ugboro ole ndọlị mwepụ igwe na-eweli igwe thermagic 6.78MHz
Ezigbo ịrụ ọrụ ugboro ole na 6.78MHz;
Aghọtara mba nile ọla edo ọkọlọtọ maka ahunsenwu mwepụ na mgbochi ịka nká, e n'ọtụtụ ebe too site ọkachamara na ụlọ ọrụ nke na-adịbeghị anya afọ iri.
Ọgbọ ọhụrụ nke thermagic rf, yana dịka onye bu ya ụzọ, ọ na-ejikwa ike ikuku redio mee ka akpụkpọ ahụ kpoo ọkụ site n'ime. Site n'inye ike dị omimi n'okpuru anụ ahụ na mmetụta dị iche, akwa nke anụ ahụ ebe a na-emepụta collagen na-ewe iwe iji mezie collagen dị ugbu a ma mepụta collagen ọhụrụ, ọkọlọtọ ọla edo mba ụwa maka iwepụ ahịhịa na mgbochi afọ.
Adabara ìgwè mmadụ ahụ
1. Ihu akpụkpọ ihu bụ flabby na droopy, na oke ndọlị;
2. Agka nká na akpụkpọ anụ ahụ, rụrụ arụ ma na-agbanye gburugburu anya na anụ ahụ anụ ahụ;
3. Mgbochi ịka nká, ịkpụ ahụ ike.
Nka na ụzụ anyị
1. Na-agwakọta teknụzụ kachasị mma nke ugboro ole na 6.78MHz na R134a refrigerant ike jụrụ iji mee ọgwụgwọ kachasị mma maka nsogbu ịka nká nke anụ ahụ;
2. 6.78MHZ redio ugboro: RF na 6.78Mhz nke mba ụwa nabatara maka ọla edo maka iwepụ ahịhịa na mgbochi ịka nká, bụ ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ ahụ toro nke ọma kemgbe afọ iri.
3. Dynamic jụrụ technology nke R134a refrigerant: Igwe na-agba mmiri na-agba agba nwere ike idobe ọnọdụ anụ ahụ ozugbo na mwepu nke ogo 20. Na nzipu nkenke nke refrigerant bụ ọkwa millisecond, ọ nwere ike belata okpomọkụ nke anụ ahụ n'okpuru ọnọdụ nchekwa nke epidermis, ma bulie ọnụ ọgụgụ nke ike RF n'ime dermis ahụ, melite ahunsenwu mwepụ na mgbochi ịka nká mmetụta.
4. Nchọpụta impedance efere na-adịghị mma: A na-enyocha nnyocha impedance site na efere na-adịghị mma ejikọtara na ahụ, a na-agbanwe ike RF n'ụzọ na-agbanwe agbanwe dị ka impedance iji hụ na nkwụsi ike nke ọnụego ọgwụ RF.
5. Nchọpụta nyocha okpomọkụ: A na-ekesa ihe mmetụta sensọ 4 dị elu ((2 maka anya) n'ụzọ zuru oke n'ime nyocha ihu 4.0cm2, nke nwere ike ịhazigharị ihe ịgba agba nke friji dị ka ogo anụ ahụ iji hụ na ọnọdụ anụ ahụ dị n'ime nchekwa.
6. nchọpụta nrụgide kọntaktị n'etiti isi ọgwụgwọ na akpụkpọ: Chọpụta nrụgide kọntaktị n'etiti nyocha na akpụkpọ ahụ iji gbochie mgbanwe nrụgide nke mmadụ mere n'oge ọrụ ahụ na-emetụta mmetụta ahụ.
Nyocha nke ugboro RF dị iche iche
Ọnụ ego dị ọnụ ala RF Ala na ọkara Ọkara DANYE RF Elu
Mbanye miri emi miri emi, oke mbibi, mana mmetụta na-adịghị mma Mbanye miri emi, mmebi ọzọ, mmetụta na-abaghị uru Mbanye miri emi, ọkara mmebi, izugbe mmetụta Ọnọdụ omimi dị omimi, obere ọnwụ, mmetụta kacha mma Mmiri omimi miri emi, obere ọnwụ, mmetụta dị mma
Mgbanwe RF 6.78MHZ
Ike RF 400W
Ngosipụta ihuenyo 12.1 inch agba LCD ihuenyo mmetụ
Ọgwụgwọ isi jụrụ usoro R134a coolant na ike jụrụ
Machine jụrụ ụzọ ikuku jụrụ
Ike ntinye 800W
Ịnye ọkụ AC110V / 8A / 60Hz
Ọgwụ Isi (nyocha)
Isi maka ihu 4.0cm2-900 gbaa
4.0cm2-600 gbaa ((nhọrọ)
Isi maka gburugburu anya na imi 0.25cm2-450 gbaa
Nke gara aga: Mpi elu ike 30W CO2 fractional na ikpu tightening laser DY-CO2-VT
Osote: Laser salon ntutu akụrụngwa na-ahọrọ igwe maka ntutu mwepụ akpụkpọ rejuvenation ipl laser DY-A4